एनआरएनए आइसीसी उपाध्यक्षमा आरके शर्माको उम्मेदवारी :: Setopati
एनआरएनए आइसीसी उपाध्यक्षमा आरके शर्माको उम्मेदवारी
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, असोज ११
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (२०२१–२०२३) कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष पदमा राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्माले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
एनआरएनएका वर्तमान आइसीसी सचिवसमेत रहेका शर्माले १० औं महाधिबेशनका लागि उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन्।
शर्माले मध्यपूर्व संयोजकको २ बर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका छन्। त्यस्तै आइसीसी सचिव हुँदा गरेको कामबाट विश्वभरका एनआरएनको जित्न सफल भएको उनको दावी छ।
‘मेरो तन, मन र धन सदैव एनआरएन अभियानमा समर्पित गर्न एनआरएनए आइसीसी उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु,’ उनले भने।
खाडि मुलुक कतारलाई कार्यथलो बनाएर स्वदेश र विदेशका विभिन्न मुलुकमा व्यवसाय गर्दै आएका शर्मा प्रवासमा रहेका नेपाली व्यवसायीसँगै श्रमिकहरुको हकहितका लागि सक्रिय छन्।
शर्माले एनआरएनएलाई विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको साझा चौतारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाए। २१ औं शताब्दी अनुसार प्रविधीमैत्री एनआरएनए बनाउनु पर्ने धारणा उनको छ।
‘आजसम्म एनआरएन अभियानबाट हाँसिल गरेको अनुभव प्रयोग गर्दै थप जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अठोट लिएर अघि बढेको छु। विगतमा जस्तै सहयोग र सुभेच्छासहित यहाँहरुले साथ दिनुहुनेमा म पूर्णरुपमा आशावादी छु,’ उनले भने।
उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने क्रममा शर्माले आफ्ना ७ बुदे प्रतिवद्धतासमेत सार्वजनिक गरेका छन ।
यस्ता छन उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका शर्माका ७ बुँदे प्रतिवद्धता
१. वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानित तुल्याउन पहल गर्ने।
२. गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सम्बन्धी कानुन ल्याइ कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने।
३. विदेशबाट पठाएको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। यसलाई देश विकास तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने। त्यस्तै १० अर्बको एनआरएन नेपाल डेभलपमेण्ट फण्डमा विशेषगरी श्रमिक बर्गको लगानी सुनिश्चितता गर्ने।
४.स्वदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र विदेशमा नेपाल चिनाउन दत्तचित्त भएर लाग्ने।
५.मध्यपूर्व, अफ्रिका अथवा विश्वका जुनसुकै कुनामा रहेका नेपालीले दुःख पाउँदा निश्वार्थ भावले सहयोग गर्ने। विदेशमा रहेका कलाकार, खेलाडी, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी र विभिन्न पेशाकर्मीको छुट्टै सञ्जाल बनाएर राष्ट्र विकासमा टेवा पु¥याउने काम सुरु गर्ने।
६.संसारभर रहेका नेपाली विरताको गाथाका रुपमा चिनिएका गोर्खाजहरुको समान हक र अधिकारका लागि लड्ने।
७. एनआरएनएको स्रोत साधन राष्ट्र विकासको अभियानमा केन्द्रित गराउन पहल गर्ने।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ११, २०७८, २०:४४:५८
ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडलमा उत्कृष्ट २५ छानिए
नेपालबाट कतार जाने यात्रुका लागि क्वारेन्टिन र खोपबारे नयाँ नियम
‘ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडल–२०२१’ हुँदै, विजेतालाई दुई लाख रूपैयाँ पुरस्कार
जनसम्पर्क समिति कतारको अधिवेशनबाट सभापतिमा स्याङ्गजाका अजिज अलि निर्विरोध
आप्रवासी श्रमिकद्वारा कतारमा विरोध प्रदर्शन
कतारमा बाहिर निस्कँदा मास्कको प्रयोग अनिवार्य, नियम नमाने २ लाख रियालसम्मको जरिमाना